LIBAAXYADA LIVERPOOL OO CABSI LOOGA QABO INAY DUSHA KA MARAAN KOOXAHA IYO RIKOODH CUSUB | Gaaroodi News
LIBAAXYADA LIVERPOOL OO CABSI LOOGA QABO INAY DUSHA KA MARAAN KOOXAHA IYO RIKOODH CUSUB
September 25, 2016 | Published by: gaaroodi
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa xalay guul wayn ka gaartay Hull City oo ay kulan ka tirsan horyaalka Premier League ku soo dhowaysay garoonka Anfield, kuwaasoo kaarka cas laga qaatay qeybta hore.
Goolka qura waxaa Hull City u dhaliyey 51’daqiiqo Meyler, halka Liverpool ay shanta gool ka kala heshay 17’daqiiqo Lallana, Milner oo labo gool ku laad dhaliyey 30,daqiiqo iyo 71’daqiiq, Mane 36’daqiiqo iyo Coutinho 52’daqiiqo.
Philippe Coutinho oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa loo doortay xiddiga garoonka ee Man of the Match.
>- Liverpool ayaa leh 13-dhibcood kaddib 6-kulan ay kal ciyaareedkan dheeshay Premier League waana kaliya markii afaraad ay Reds ay ugu yaraan 13-dhibcood uruursato lixda kulan ee ugu horreysa Premier League.
>- Min 14-dhibcood ayay Reds uruursatay xilli ciyaareedyadii 1996/97 iyo 2008/09, halka ay 13-dhibcood uruursatay 2013/14, waxayna waqtiyadaa ku kala dhammeysatay Premier League, afaraad iyo labo jeer oo ay kaalinta labaad gashay.
>- Adam Lallana ayaa goolkiisii ugu horreeyey Liverpool Premier League ugu dhaliyey iyagoo ka horjeeda Hull City, tan iyo Luis Suárez oo shabaqa soo taabtay kulan ay 2-0 uga adkaadeen gurigooda maalintii sanadka cusub 2014-kii.
>- Adam Lallana ayaa lix kulan oo Premier League ugu dhaliyey Liverpool 3 gool, kaddib markii xilli ciyaareedkii hore ee 2015/16 ay Lallana 30 kulan ku qaadatay inuu ku dhaliyo 4 gool horyaalka Premier League.
>- Liverpool ayaa dhalisay ugu yaraan afar gool kulamo xiriir ah oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League markii ugu horreysay, tan iyo bishii April sanadkii 2016, markaasoo ay min afar gool ka kala dhaliyeen kooxaha Stoke iyo Everton.
>- Liverpool ayaa la wareegtay rikoodhka rigooreyaasha Premier League, waxaana ay dhalisay 107 gool ku laad, iyadoo hal gool ku laad dheer Chelsea oo dhalisay 106 rigoore.
>- Goolasha uu James Milner ugu dhaliyey Liverpool horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa dhammaantood waxa ay yihiin gool ku laad ama rigoore.
>- Miner ayaa gool dhaliyay 43 kulan ee kala duwan Premier league, ma uusan guul darreysan 42 kulan uu horrey goolal u dhaliyay (34 guul iyo 8 barbaro).
>- Sadio Mane ayaa ku lug lahaa 14 gool 15-kiisii ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray heerka kooxaha, waxaana uu dhaliyey 11 gool, isagoo caawiye ka ahaa 3 gool oo kale.
>- Sadio Mané ayaa lix gool u gacan galiyey Liverpool lix kulan oo uu u ciyaaray, waxa uu dhaliyey saddex gool, halka saddex kale uu caawiye ka ahaa.
>- Philippe Coutinho ayaa dhaliyey 8 gool oo uu ka soo tuuray bannaanka xerada ganaaxa horyaalka Premier League tan iyo markii uu bilowday sanadka 2015, waxaana uu 2 ka badan yahay ciyaaryahan waliba.